Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo si kulal u dhaliilay Gudoonka Baarlamaanka iyo madaxtooyada qaranka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo si kulal u dhaliilay Gudoonka Baarlamaanka iyo...
Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo si kulal u dhaliilay Gudoonka Baarlamaanka iyo madaxtooyada qaranka
Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo ah Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga iyo warshadaha ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in go’aankii Guddiga Joogtada ay muddo bil waqtiga ugu kordhiyeen Guddiga doorashada madaxa bannaan uu ahaa mid afduub ah.
“Guddoonka Baarlamaanka ayaa fushaday qorsho ay wateen horayna loogu soo heshiiyey.”—-Xildhibaan Beenne Beenne
Maxamuud Beene Beene ayaa sheegay in go’aankaas uu ahaa mid qorsheysan oo lagu jebiyay sharciga doorashada, isla markaana qorshe horay loogu soo heshiiyay oo Guddoonka uu fushaday.
“Go’aanadi Shirki Labada guddi joogto waxaa uu aha go’aano qorsheysan oo afduub ah, waliba qodobo sharciga doorashada ah ayaa la jabiyey, Guddoonka ayaa fushaday qorsho ay wateen horayna loogu soo heshiiyey”ayuu yiri Xildhibaan Beenne Beenne.
Sidoo kale waxaa uu xusay in xubno ka mid ah Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada ay ka wada shaqeynayaan muddo kororsi.
Go’aankii maalin ka hor uu Guddiga Joogtada labada Gole ku shaaciyay in Guddiga doorashada uu Baarlamaanka hor imaanayo 27-ka bisha June ee soo socota ayaa waxaa walaac ka muujiyay xubno ka tirsan Beesha Caalamka, sida Wakiilka Midowga Yurub iyo Safiirka Sweden u fadhiya Soomaaliya oo ka digay cawaaqib ka dhalan kara doorasho aan waqtigeeda ku dhicin iyo dib u dhac ku yimaada taariikhda cusub ee loo qabtay Guddiga doorashada inay ku hor-tagaan Baarlamaanka.